Zimbabwe Insurance Industry - Governance, Risk and Compliance | GDIS0048RR
Our ’Zimbabwe Insurance Industry - Governance, Risk and Compliance’ report is the result of extensive research into the insurance regulatory framework in Zimbabwe.
The Zimbabwean insurance industry is regulated by IPEC.
The life and non-life insurance businesses in Zimbabwe are regulated by the provisions of the Insurance Act 1987.
The motor third-party liability insurance, National Pension Scheme (NPS) and Workers Compensation Insurance Fund Scheme (WCIF) are mandatory in Zimbabwe.
100% FDI is permitted in the Zimbabwean insurance industry.
Non-admitted insurers and intermediaries are not allowed in the Zimbabwean insurance industry.
The report provides insights into the governance, risk and compliance framework pertaining to the insurance industry in Zimbabwe including -
An overview of the insurance regulatory framework in Zimbabwe.
Rules and regulations pertaining to key classes of compulsory insurance, and the scope of non-admitted insurance in Zimbabwe.
The report covers details of the insurance regulatory framework in Zimbabwe.
Gain insights into the insurance regulatory framework in Zimbabwe.
Track the latest regulatory changes, and expected changes impacting the Zimbabwean insurance industry.
Interesting ASD Report Zimbabwe Insurance Industry - Governance, Risk and Compliance